भलिबललाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साथ | Hamro Khelkud
भलिबललाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साथ
आइतबार, चैत २०, २०७३
काठमाडौँ (हाम्रो खेलकुद) – नेपाल भलिबल संघले मुख्य प्रायोजकको रुपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पाएको छ । नेपाल भलिबल संघलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दुई वर्षको लागि वार्षिक १० लाख दिने शर्तसहित मुख्य प्रायोजन गरेको हो । यो प्रायोजन चैत अन्तिम सातादेखि शुरु हुने तेस्रो राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिप देखि नै लागु हुनेछ ।
सम्झौता पत्रमा नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्मा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी प्रमुख डा. रविन्द्र प्रसाद पाण्डेले हस्ताक्षर गरे । नेपाली भलिबल इतिहासमा यो नै सबैभन्दा ठुलो प्रायोजन हो । यसअघि सन् २०१२ मा बीच भलिबलका लागि पेन्टागन कलेजले ३ लाख ५० हजारको प्रायोजन गरेको थियो । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै चैत अन्तिम सातादेखि शुरु हुने तेस्रो राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपको नाम आरआरबी एनभिए राष्ट्रिय लिग रहनेछ । च्याम्पियनसिप चैत २९ देखि वैशाख ४ गतेसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कबर्ड हलमा चल्नेछ ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख डा. रविन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेपाली भलिबलसँग जोडिनु बैंकको लागि गौरवको कुरा भएको उल्लेख गरे । त्यस्तै उनले भौगोलिक बनावटको आधारमा पनि भलिबल लोकप्रिय रहेको भन्दै खेलकुद जगतमा केही गर्ने योजनासहित भलिबलसँग सहकार्य गर्न आइपुगेको बताए । दुवै पक्षकोृ सहमति भए । सहकार्य निरन्तर हुदै जाने पनि उनले जानकारी गराए । यस्तै भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्माले आइतबारको प्रायोजन सम्झौतासँगै नेपाली भलिबलले इतिहास रचेको बताए । यस्तै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) किरण कुमार श्रेष्ठले नेपालको लोकप्रिय खेल भलिबलसँग जोडिन पाउनु खुशी र गौरवको कुरा रहेको बताए । यस्तै नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष महेश आचार्यले पछिल्लो समय नेपाली खेलकुदमा प्रयोजन पाउन मुस्किल रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भलिबललाई प्रायोजन गर्नु नेपाली खेलकुदका लागि सुखद पक्ष रहेको बताए ।
लिगमा गत भदौमा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपमा परेको उत्कृष्ट पुरूष र महिला टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । लिगमा पुरूषतर्फ ८ र महिलातर्फ ६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । दुवैतर्फको लिगको बिजेताले २ लाख, दोस्रोले १ लाख, तेस्रोले ५० हजार र चौथोले २५ हजार पाउनेछन् । यस्तै उत्कृष्ट खेलाडीले १५ हजार पाउँदा लिब्रो, सरभर, लिफ्टर, स्पाईकर र प्रशिक्षकले समान ५–५ हजार पाउनेछन् ।